Notify for Mi Band အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.9 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（20.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Notify for Mi Band: Your privacy first
Selfie, Voice, Voice Assistant, Alexa, HTTP တောင်းဆိုမှု ... )
✏️ WhatsApp, Telegram, The Request Reply Whatsapp, 🗓️ Sync Phone ပြက္ခဒိန်ပြက္ခဒိန်သတိပေးချက်များ, စိတ်ကြိုက်ထပ်တိုးသတိပေးချက်များ, Alarm, Power Nap
- 🗺️မြေပုံများ, Alexa နှင့် Google Clock app Denticated Support
each အဆက်အသွယ်တစ်ခုစီအတွက်အသိပေးချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း (အမေ, ရည်းစား, သူငယ်ချင်းများ, သူငယ်ချင်းများ, ရက်များ, တည်နေရာကို မူတည်. အပြုအမူများ ...
📞 VoIP ခေါ်ဆိုမှုသတိပေးချက်များ - WhatsApp, TehsApp, Messiber, Viber, Hangouts, Line, Zalo တို့, WhatsApp, ThatsApps, Viber, Hangouts, Line, Zalo (Whatsapp အုပ်စုများ, DND ဖုန်း ... )
🔋ဖုန်းဘက်ထရီမြင့်မားသော / အနိမ့်သတိပေးချက်, Timer, Countdown Phone, anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anties)
🏃 toods sessions များ - 🏃 text ည့်သည်များ (အဆင့်, နှလုံး, ကယ်လိုရီ, GPS)
: ❤️နှလုံးမြင့် / အနိမ့်သတိပေးချက်များ, နိမ့် / မြင့်မားသောနှလုံး VA ကိုလျစ်လျူရှု Lues Br >> 🔗 Google Fit data စည်းညှိခြင်း, sprecrava, runna, runkore, runalyze, tcx, gpx, gpx moneys)
🔗 tradgets (နှင့်အလားတူ app) ပေါင်းစည်းမှု
👣လှေကားထစ်များ, အိပ်စက်ခြင်း, နှလုံး, ကယ်လိုရီ, အလေးချိန်အချက်အလက်များခြေရာခံခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
- 🛌 Android Support အဖြစ်အိပ်ပါ။ : 💬ဖုန်းသတိပေးချက်များ - Calls, Whatsapp, Telegram, Instagram, SMS, SMS, SMS, SMS, SMS, SMSATESS နှင့် 8 ဇာတိသတိပေးချက်များ - ⚖️ MI Smart Alarms 1 &2နှင့်အခြားအကြေးခွံများကို "href =" http://www.google.com/url?q=ht?q=htok=httke.com/discussion/5244/Scale-supported-ontsion/524/scale-supported-on-ontsion/App&sa = D & SNTZ = 1 & usg = afqjcneb4vdlbkbkbkbpq6_b5bgress5sqh3l3A "> Full List
Mi Firmware upload နှင့်အခြားချိန်ညှိချက်များနှင့်အခြား setteSts and ⌚
နိဒါန်းကိုသင်၏တီးဝိုင်းတွင်စိတ်ကြိုက် (icon, စာသားနှင့်တုန်ခါမှု) သတိပေးချက်များကိုရယူပါ သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်သင်သတိပေးချက်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ရရှိသည်။ သင်မည်သည့်ခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုမဆိုသင်ဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။0င်ရောက်လာခြင်းနှင့်လွဲချော်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလုံး၏အသိပေးချက်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ WhatsApp သတင်းစကား။
လေ့ကျင့်ခန်းများ, ခြေလှမ်းများ, အိပ်စက်ခြင်း, သင်၏ရက်သတ္တပတ်၏ကိန်းဂဏန်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များရရှိရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
Music Track ကဲ့သို့သောစိတ်ကြိုက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုပါ။ Music Assistant Strant Alexa လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဖွင့်ပါ, မင်းတီးဝိုင်းရဲ့အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ဖို့ Emoticons တွေကိုသော့ဖွင့်ပြီးစောင့်ကြည့်ရေးအသစ်တွေကိုတပ်ဆင်ထားဖို့တီးဝိုင်း။
✅အားလုံး Mi Band All Supported: 6, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1
တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကို http://www.google.com/url?q=htttp://forum.mibandnotify.com/discussion/discussion/discussion/discussion/discussion / Xiaomi-wearable-app-is-is-dry & sa = usg = usg = agjcnnf34fw-p3bjcnf34fw-p5sfit &b>> zepp
Devices (Bip, Cor, GTS, GTS, GTS, GTS, Startros) ကိုလည်းထောက်ခံသည်
Amaztc.Ang.mc.amazfit တွင်လည်း Zepp
❗ဒီ app ဟာ Xiaomi / Huami နဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိဘူး။ ဤအက်ပ်တွင်အာမခံချက်မရှိပါ။ Mi, Mi Fit, Mi Band, Amazfit တို့က Xiaomi / Huami ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မပေးပါဘူး။ ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ, ရောဂါရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကုသမှုကိုအစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။
Main ဘယ်ဘက်လက်ဝဲမီနူးပေါ်ရှိ app Hret အပိုင်းကိုစစ်ဆေးပါ။ http://www.google.com/url?q=ht?q=h=ateg=ateg=SAQ&sa=D&sntz=1&usg=fqjjcnnnnninmrmpwwwwwwwwwwwwwwwwwws83us8M9M9m9M9M9M9M9M9M9M9MBSMRMKS83US8M9M9M9M9Y4CY4CY4CYDJLSGLSGKS83UNDDY4CY4CY4CY4CY4CYDJLS83US8M9M9Y4CY4CYDJLSGLESGKS83US8M9M9M9Y4CY4CY4CY4CY4CY4CY4CYDJLSGLOWS83UNDDY4CY4CY4CY4CYDJCLJLSGLESS မေးခွန်း / အကြံပြုချက် Gmail.com တွင် Mat90C အီးမေးလ်:
🌍🌍🌍🌍အက်ပလီကေးရှင်း, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, ဂျာမန်, ဂျာမန်, တရုတ်, ဂလော့စ်,, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂရိ, ဂရိ, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂရိ, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂရိ, ဂလော့စ်တမန်, ဂရိ, ဂရိ, ဂရိ, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂရိ, ဂလော့စ်တမန်, ဂရိ, ဂရိ, ဂရိ, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂရိ, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂရိ, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂလော့စ်တမန်, ဂရိ, ဂရိ, ဂလော့စ်တမန်, ဂရိ, ဂရိ, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂလော့စ်တမန်ရေး, ဂရိ, ဂရိ, ဂလော့စဘီလာအို, ဂရိ, ဂပြနျ, ဂလော့စ်တမန်ရေး,, ရိုမေးနီးယား, စလိုဗက်, အင်ဒိုနီးရှား, ဗီယက်နမ်, ဘူဂေးရီးယား, ဘာကရာကာလန်, ကာတာလန်, ကာတာလန်, တူရကီ, ပါရှား, တူရကီ, ပါရှား,
ဘာအသစ်လဲ Notify for Mi Band: Your privacy first 14.0.4
- Circular steps progress bar on notification
- Added additional silent notifications interval option
- Added latest Mi Band6firmware support
- Added Spo2/stress data export
Mi Band5Hidden Features + ULTIMATE HACKS | Maps, Camera and more !
Mi Smart Band6- Notification Test
Lookout: Mobile Security, Antivirus, ID Protection
BetterButter - Recipes, Diet Plan & Health Tips